Ubhaptizo lithetha ntoni kumaKristu?
Injongo yobhaptizo ebomini bobuKristu
Amacawa amaKristu ahluke kakhulu kwiimfundiso zabo ngokubhaptizwa.
Amanye amaqela enkolo akholelwa ukuba ubhaptizo lufeza ukuhlanjululwa kwesono .
Abanye bacinga ukuba ubhaptizo luhlobo lwenkohlakalo yokukhwabanisa kwimimoya emibi.
Kanti abanye bafundisa ukuba ubhaptizo luyinyathelo ebalulekileyo lokuthobela ebomini bokholo, kodwa kuphela ukuvuma kwamathuba okusindiswa asele eyenziwe. Ubhaptizo ngokwawo alukwazi ukuhlambulula okanye ukusindisa kwisono. Lo mbono ubizwa ngokuba yi "Believer's Baptism".
Incazelo ngokubanzi yebhaptizo elithi "yinto yokuhlamba ngamanzi njengombonakaliso wokuhlanjululwa kwezenkolo kunye nokuzinikezela." Lo mboniso wawuqhutyelwa rhoqo kwiTestamente Elidala. Kwakubonisa ukuhlanzeka okanye ukuhlanjululwa kwisono nokuzinikela kuThixo. Ekubeni ukubhaptizwa kuqala kuqaliswe kwiTestamente Elidala abaninzi baye bazenza njengesiko kodwa bengayiqondi ngokucacileyo ukubaluleka kwayo kunye nenjongo.
Ubhapathizo lweTestamente Elisha
KwiTestamente Entsha , ukubaluleka kokubhaptizwa kubonakala ngokucacileyo. UYohane uMbhaptizi wathunyelwa nguThixo ukusasaza iindaba zoMesiya ozayo, uYesu Kristu . UYohane wayekhokelwa nguThixo (uYohane 1:33) ukubhaptiza abo bamkele isigidimi sakhe.
Ukubhaptizwa kukaYohane kwakubizwa ngokuba "ubhaptizo lweenguqulelo zokuxolelwa kwezono." (Marko 1: 4, NIV) . Abo babhaptizwa nguYohane bavuma izono zabo baza bathi ukholo lwabo kukuba baya kuxolelwa ngoMesiya ozayo.
Ubhaptizo luphawuleka kuba lumele ukuxolelwa nokuhlanjululwa kwisono esiza ngokholo kuYesu Kristu.
Ubhaptizo lwamanzi lubonakalisa ukholwa kunye noThixo: uYise, uNyana kunye noMoya oyiNgcwele :
"Ngoko hambani niye kubafundi beentlanga zonke, nibabhaptize egameni likaYise noNyana noMoya oyiNgcwele." (Mateyu 28:19, NIV)
Ubhapathizo lwamanzi lubonakalisa ukholwa noKristu ekufeni kwakhe, ukungcwaba kunye novuko:
"Xa ufikile kuKristu, 'walukwa,' kodwa kungekhona yinkqubo engokwenyama.Yayinkqubo yokomoya - ukunqunyulwa kwesono sakho, ngokuba wangcwatshwa noKristu xa ubhaptizwa. bavuswe kubomi obutsha kuba uthembela ngamandla amakhulu kaThixo, owavusa uKristu kwabafileyo. " (Kolose 2: 11-12, NLT)
"Ngoko-ke sangcwaba kunye naye ngokubhaptizwa ekufeni ukuze, njengokuba uKristu wavuswa kwabafileyo ngozuko lukaYise, nathi sinokuphila ubomi obutsha." (Roma 6: 4, NIV)
Ukubhaptizwa kwamanzi kuyisenzo sokuthobela umkholi. Kufuneka kulandelwe ukuguquka, oko kuthetha ukuba "utshintsho." Ukuguquka kwisono sethu nokuzingca ukukhonza iNkosi. Kuthetha ukubeka ikratshi, lethu elidlulileyo kunye nezinto zethu zonke phambi kweNkosi. Inika ubomi bethu phezu kwayo.
"UPetros waphendula wathi, 'Yilowo nalowo makayeke ezonweni zenu nibuyele kuThixo, nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuxolelwa kwezono zenu, niza kwamkela isipho soMoya oyiNgcwele.' Abo babekholelwa oko uPetros athi babhaptizwa kwaye bongezwa kwicawa-malunga namawaka amathathu kubo bonke. " (IZenzo 2:38, 41, NLT)
Ubhaptizo lwamanzi lububungqina bobubanzi : ukuvuma kwangaphandle kwimeko yamava. Xa sibhaptizwa, simele phambi kwamangqina avuma ukubonakaliswa kwethu kunye neNkosi.
Ubhaptizo lwamanzi ngumfanekiso obonisa iinjongo ezinzulu zokomoya , ukuvuka nokuhlambuluka.
Ndabethelelwe emnqamlezweni kunye noKrestu kwaye andisaphila, kodwa uKristu uhleli kum. Ubomi ndihlala emzimbeni, ndiphila ngokholo kuNyana kaThixo , ondibathandayo, wazinikela ngenxa yam. (Galati 2:20, NIV)
"Ngoko-ke saye sangcwatywa kunye naye ngokubhaptizwa ekufeni ukuze, njengokuba uKristu wavuswa kwabafileyo ngenxa yobuqaqawuli bukayise, nathi sinokuphila ubomi obutsha. Ukuba sihlangene kunye naye ekufeni kwakhe , ngokuqinisekileyo siya kuhlanganisana naye ekuvukeni kwakhe. " (Roma 6: 4-5, NIV)
"Wafa ngokukhawuleza ukuba anqobe isono, kwaye ngoku uhlala ngenxa yozuko lukaThixo. Ungazivumeli nayiphi na inxenye yomzimba wakho ukuba ibe yinto yokubungendawo, ukuba isetyenziswe ekukona, kunoko, zinike ngokupheleleyo kuThixo ukususela ekubeni unikezelwe ubomi obutsha. sixhobo sokwenza okulungileyo ngozuko lukaThixo. " KwabaseRoma 6: 10-13 (NLT)
"Yaye le manzi ibonisa ubhaptizo olusindisayo ngoku - kungekhona ukususwa kwengcola emzimbeni kodwa isibambiso sesazela esiluncedo kuThixo.Usindise ngovuko lukaYesu Kristu." (1 Petros 3:21, NIV)
"Kodwa nihlambulukile, ncweliswa, nilungiswa egameni leNkosi uYesu Kristu nangomoya kaMoya wethu." (1 Korinte 6:11, NIV)
'Je Vais': Musa ukwenza le Mistake ngesiFrentshi
Amakhaya eNoocolonial kuma-1950s-1960 aseMelika
Ukudala nokusebenzisa iiRubrics
"Gcina Amehlo Akho Ngomvuzo": I-Civil Rights Movement Anthem